ကောင်းကင်ဖြူ: ကားအရောင် ရွေးချယ်ခြင်း
Posted by မောင်ဘုန်း at 1:45 AM
SHWE ZIN U August 30, 2011 at 6:29 AM
အရောင်တွေ အကြောင်းကိုပို သဘောပေါက်သွားတယ် အမ မာစီးဒီး ကားဝယ်တော့ မှာဘဲ ထပ်ဆွေးနွေးတော့ မယ် ဒီကြားထဲလည်း ဗဟုသုတ ရအောင် ပိုစ့် လေး တွေ ဆက်တင်ထားနော်
(အနီရောင်ကားတစ်စီးဝယ်ပြီးသွားရင်တော့ နောက်ထပ်ဆေးပြန်မှုတ်ရင် အရောင်မပြောင်းပဲ အနီရောင်ပဲပြန် မှုတ်သင့်ပါတယ် …. ဘာကြောင့်လည်းဆို၇င် … အနီရောင်ဟာ ဆေးပြန်မှုတ်ရင် RGB အုပ်စုမှ အရောင်တွေကို လုံးဝ လက်မခံပဲ အရောင် မအုပ်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ရှိလို့ ပါ …. ( အရောင်အုပ်အောင် မှုတ်မယ်လို့ ဆို၇င်လည်းရပါတယ် ဒါပင်မဲ့ တစ်နှစ်တောင်ခံမှာမဟုတ်ပဲ ကားတစ်စီးလုံး ဆေးရောင်ပျယ် တယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် )..... ကိုဘုန်းရေ...ဒါလေးတော့မှားနေတယ်...........................................................ကိုဘုန်းပြောတဲ့အနီကို ဆေးမအုပ်ဘူးဆိုတာ အဲဒီဆေးအနီက ပေါင်းဆေး အရောင်လွင့် ပြောရရင်သက်တမ်းကုန်ပြီး ဆွေးနေတာပါ ပက်ကြားမအက်သေးပါဘူး..အဲဒါဆိုလုံးဝမရပါဘူး..2k ဆိုရင် ရပါတယ်... ဒါပေမဲ့သူ့ကို ခံဆေး(clear ခံဆေးလုံးဝမရပါ..)သေချာမှုတ်ပြီး ဆေးပြန်မှုတ်မယ်ဆိုရင် သေချာပေါက်ရပါတယ်...အရောင်လည်းမပြယ်ပါဘူး... အခုနောက်ပိုင်း မော်ဒယ်မြင့်ကားအနီရောင်တွေကတော့ 2k ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းဆေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးအသစ်တွေက ခံဆေးမလိုပါဘူး ..ရပါတယ်... ဆရာလုပ်တယ်မထင်ပါနဲ့...မျှဝေတာပါ..... အမြဲအားပေးနေပါတယ်
မောင်ဘုန်း April 10, 2012 at 9:28 AM
တစ်ခုခုတော့ လွဲ နေပြီ ထင်ပါတယ် ... အခုလို အမြဲ အားပေးအတွက် အတိုင်း မသိ ကျေးဇူး တင်မိပါတယ် ။
2k အနီ ရောင် ကို အနီ ရောင် ထပ်မှုတ်ရင် ..... ဥပမာ signal red 396 - 437 ဆိုပါတော့ ဗျာ ... ဆေးမှုတ်ပြီးရင် signal red 396 - 437 ကို ပြန်မရတော့ပါဘူး ။ နည်းတော့ လွဲ သွားပါတယ် ။
putty များလို့ဆေးကို နှစ်ထပ် ထက်ပိုပြီး မှုတ်မယ် ဆိုရင် ပိုလို့တောင်လွဲသွားပါတယ် ။
နောင်တော် ပြောသလို ပေါင်းဆေး ဆိုရင် လုံးဝ မရတော့ ဘူးဆိုတာတော့ ... ဟုတ်ပါတယ် လို့ပြောရမှာပဲ .... ဒါပင်မဲ့ ရအောင်လုပ် မယ် ဆိုရင် လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပမာ အနီ ရောင် ကို ပျယ်စေတဲ့ .... 396- 431 (ပန်းရောင် အဖြူ + အနီ ) ကို ခံပြီ လုပ် ဆို၇င် ရပါတယ် ။
နောင်တော်ရေ .... ကျနော် လည်း သိသလောက် လေး ၊ လုပ်ဖူး သလောက်လေး ပြန်ပြောမိတာပါ ...။ အခုလို အချိန်ပေးပြီး ရောက်လာပေးတဲ့ အတွက် ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူးတင် ပါ တယ် ။
ကျနော် တို့ ကြားမှာ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့် ရှိပါတယ် ။
LIVING TOGETHER နှင့် အမျိုးသမီး အခွင့်ရေး ဆိုတဲ့ post လေးကို ဘာရည်ရွယ်ချက် နဲ့ရေးတယ် ဆိုတာ ကျနော် ဖော်ပြပြီးသာပါ ... ။ နောက်ပြီေ...
မင်္ဂလာပါ ဗျာ … ။ ကားအကြောင်း တွေ မရေး ဖြစ်တာလည်း ကြာပါပြီ … ။ ဒီနေ့တော့ ကျနော် blogger မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း များ ၊ ကျနော် blog လေး...